Mogadishu Journal » Saamaynta caafimaad ee tubaakada
Saamaynta caafimaad ee tubaakada
Mjournal :-Iyadoo sanad walba maanta oo kale 31-ka May 2018 ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey joojinta cabista sigaarka ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxay mar kale bulshada kaga digayaan qatarta uu leeyahay iyo cudurada halista ah ee ka dhasha.
Prof. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka waramay dhibaatada uu sigaarka iyo noocyada kale ee tubaakadu ku hayaan caafimaadka iyo dhaqaalaha bulshada.
Waxaa uu sheegay Profesor. Dufle in sanadkan heyadda caafimaadka Adduunka ee WHO ay diirada saartay sigaarka iyo cudurada uu u keeno wadnaha iyo xididada “Tobacco and heart disease” si loo muujiyo qatarta iyo dhibaatada cabista sigaarku u leedahay wadnaha qofka isticmaalaya.
“Maanta oo ay ku beegan tahay 31-ka May 2018 waa maalinta loo asteeyay joojinta cabista sigaarka ee caalamka, taasoo looga gol leeyahay in bulshada lagu wacyi geliyo khatarta uu leeyahay, tubaakada waxay u kala baxdaa noocyo badan sida: Sigaarka, Siigarka, Bayb-ka, shiishada, Tubaakada la ruugo, mida la calaliyo iyo tan kale ee daanka la gashado, intaasoo dhanba waa khatar caafimaad haba ku kala badnaadeene” ayuu intaa ku daray Prof. Dufle.
“Sigaarku wuxuu sababaa dhimasho degdeg ah ama cimri gaabad, waxaana la sheegaa in sanad walba ay u dhintaan sigaar cabista qiyaas dhan 7 milyan oo qof, qiyaastii 900 oo kun oo ka mid ah dadkaasna ay yihiin dadka aan cabin sigaarka sida tooska ah (”Second hand Smoke)” ayuu yiri dhaqtarku.
Prof. Dufle ayaa tilmaamay in sigaarka laga helo in ka badan 4,000 kun maaddo oo sun kiimiko ah, 250 ka mid ah maadooyinkaasna ay yihiin kuwa Qatar ku ah caafimaadka aadanaha, in ka badan 50 kalena ay dhalin karaan cudurka kansarka. Waxaana ka mid ah ayuu yiri maaddada (Tar, Arsenic, benzene, formaldehyde, carbon monoxide & amooniyo) waxaa kaloo ku jira ayuu yiri dhaqtarku maadada Nicotin-ka oo sababa in la qabatimo sigaarka jir ahaan iyo maskax ahaan.
Dhaqtarka ayaa sheegay in cabista sigaarka uu sababo 25 cudur oo ay ka mid yihiin kuwa ku dhaca wadnaha iyo xididdada 20-30% (Heart attack and Stroke), wuxuu kaloo sababaa cudurada sambabka ku dhaca sida Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), sambabka oo weynaada ama adkaada (Emphysema), Chronic Bronchites; wuxuu kaloo sheegay inuu sababo cudurka kansarka ku dhaca sambabka 30-35 %. Kansarka Dhuunta iyo Afka (larynx and mouth), kansarka ku dhaca hunguri-wadeenka (Esophagus), Pancreas-ka, Caloosha, Beerka, Xameytida, Xiidmaha, Kaadi-heysta, Qabsinada, Ilma galeenka. Wuxuu kaloo sheegay inuu keeno dhalma la’aanta ragga iyo haweenka intaba.
“Khatarta kale ee sigaar cabistu waa qofka ka ag dhow meesha lagu cabayo (Second-hand smoke) oo qaadanaaya qiiqa sigaarka agagaarkiisa lagu cabaayo, kaasoo la sheegay in khatartii cuduradii la soo sheegay ay ku dhici karaan qiyaas dhan 25-30%” ayuu yiri Prof-ku.
Waxaa Prof. Dufle xusay in WHO ay ugu baaqday dowladaha caalamka iney qaadaan talaabooyin lagu xamakeynayo tubaakada sida:-
1-In bulshada laga wacyi geliyo dhibaatada caafimaad iyo mida dhaqaale ee sigaarku leeyahay, iyadoo la adeegsanayo bahda caafimaadka, warbaahinta iyo ururada bulshada.
2-In cabista sigaarka laga mamnuuco goobaha la iskugu yimaado, sida Tiyaatarada, Suuqyada, Basaska, iskuulada, isbitaalada, guryaha shirarka iwm,.
3-In aan sigaarka laga iibin caruurta aan qaangaarin.
4-In la mamnuco xayeysiinta qeybaha kala duwan ee warbaahintu u sameyso tubaakada iyo sigaarka.
5-Iney sigaarsi ku kordhiyaan canshuuraha.
6-In baakadaha sigaarka lagu qoro khatarta uu u leeyahay caafimaadka aadanaha.
Bulshada Soomaaliyeed ayuu sheegay 20-kii sano ee u dambeysay ee burburka, dagaalada iyo barakaca ay si xaddi leh u kordheen tirada sigaarka cabta gaar ahaan dhalinyarada da’da yar. Waxaa kaloo kordhay ayuu yiri dadka Shiishadda isticmaala dhalinyaro iyo dad waaweyn, haween iyo rag, kuwaasoo uu xusay iney ku keeni karayso mustaqbalka dhibaato weyn oo dhanka caafimaadka.
Ugu dambeyn Prof. Cismaan Xaaji Maxamuud (Dufle) Wuxuu dhammaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay meel kastoo ay joogaan iney ka fogaadaan cabista sigaarka bacdamaa diinteenna Islaamka aysan oggoleyn in nafta la tahluukeeyo, khatartii caafimaadka ee aan kor ku soo xusnayna uu keenayo.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kormeeray xafiisyo ay yeelanayaan Guddiyada BFS
Dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha oo dib u dhisaya biyo Mareenada Caasimadda